Global Voices teny Malagasy · Raveloaritiana Mamisoa – Novambra 2013
Raveloaritiana Mamisoa · Novambra, 2013
Lahatsoratra farany an'i Raveloaritiana Mamisoa tamin'ny Novambra, 2013
Miarahaba an'i Kaire! Tamin'ny 16 Novambra no notontosainay tao amin'ny ivon-toerana "The Workshops" ao Maadi ny fihaonana "meetup". Niresaka momba ny Global Voices, teknolojia sy ny fiarahamonina izahay.
Tweets2Rue: Mifandray Antserasera Amin'ireo Olona Monina Eny An-dalambe
Mpanoratra Suzanne Lehn · Frantsa
Satria tsy misy olona afaka hisolo-toerana azy ireo afa-tsy izy ireo ihany mba hitantara ny zava-iainan'ireo olona tsy manan-kialofana.
Mpisera Twitter Boliviana Nosamborina Satria Naka Sary Tranobe Manan-tantara
Mpanoratra Pablo Andrés Rivero · Amerika Latina
Nosamborin'ny polisy ireo mpisera Twitter Boliviana satria naka sary tranobe manatantara. Tonga namonjy azy ireo avy hatrany ireo mpiserasera Boliviana rehefa nampilazaina tamin'ny alalan'ny sioka.
“Hanaovantsika Sarintany i Nizera”: Fatiman Alher
Fantaro i Fatiman, iray amin'ireo mpandray anjara amin'ny tetikasa "Mandrakitra an-tsarintany ho an'i Nizera", nanamafy ny fahaizana mampiasa dizitaly izy ary nampihatra izany tamin'ny fianarana jeografia nataony. Nanampy azy hahay mijery vaovao ny taotsarintany diizitaly.
Tafatafa Amin'i Abdou Salam, Anisan'ny Tompon-kevitra Tamin'ny Tetikasa “Hanaovantsika Sarintany i Nizera”
Fantaro i Abdou Salam, mpianatra taranja jeografia, iray amin'ireo mpandray anjara tamin'ny tetikasa Sarintany ho an'i Nizera.
Mpanao Gazety Syriana Abdulwahab Mulla Nalaina An-keriny Tao Aleppo
Mpanoratra Nour Al Ali · Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana
Nalain'ireo jiolhay misaron-tava an-keriny tao an-tranony ao amin'ny faritra afaka ao Aleppo ilay mpanao gazety olo-tsotra sy mpanesoeso Abdulwahab Mulla, 24 taona. Mitaky ny famotsorana azy ireo mpiserasera.